Nidaamyada daabacaadda: waxa ay yihiin iyo sifooyinkooda guud | Hal-abuurka khadka tooska ah
Xigasho: The Confidential
Dunida daabacaadda ayaa si sii kordheysa ugu baahan baahida qaybta naqshadeynta garaafyada ama warshadaha. Si aad u badan, nashqadaas iyo daabacaadda ayaa had iyo jeer gacanta ku wada socda. Gaar ahaan, haddii aad ka shaqeyso qaybta naqshadeynta garaafyada xayeysiinta, waxaad ogaan doontaa gacanta koowaad oo waxaad ogaan doontaa waxa aan ka hadleyno.
Marka aan naqshadeyno, shaki ayaa had iyo jeer ka soo baxa habka daabacaadda ee ugu fiican mashaariicdayada, haddii aan la yaabi doonno markaan aragno midabada marka aan daabacno, ama haddii taa beddelkeeda, profile color profile waa sax oo waxay muujinayaan sida aan horayba u eegno shaashadda.
Hagaag, Maqaalkan waxaan u nimid inaan sharaxno waxa ay yihiin dhammaan nidaamyadan daabacaadda iyo sida loo daabaco ama loo soo bandhigo warshadaha naqshadeynta. Fiiro gaar ah u yeelo sababtoo ah waxaan kuu sharxi doonaa tafaasiil gaar ah oo laga yaabo inay xiiso u yeeshaan inaad ogaato shaqada mustaqbalka ee aad qabato.
1 nidaamyada daabacaadda
1.1 Daabacaadda Offset
1.1.1 Faa'iidooyinka isticmaalka nidaamkan:
1.1.2 Khasaaraha nidaamkan:
1.2 daabacaad dijital ah
1.2.1 Faa'iidooyinka nidaamkan:
1.2.2 Khasaaraha nidaamkan:
1.3.1 Faa'iidooyinka habkan daabacaadda:
1.3.2 Khasaaraha nidaamkan daabacaadda:
2 Noocyada daabacaha
Isha: Adeegga baabuurta
Nidaamyada daabacaadda ayaa la qeexay sida mid ka mid ah siyaabaha badan ee jira si loogu dhufto sawirka meel dhexdhexaad ah oo gaar ah. Taageeradan waxaa had iyo jeer lagu go'aamiyay warqad iyo shiraac labadaba. Hubaal haddii aad taqaan taariikhda madbacadda, waxaad ogaan doontaa inaan horumar ku filnayn si aan u ogaanno sida ugu dhakhsaha badan ee aan u daabacno sawirka.
Waqtigan xaadirka ah, haddii aan ka hadalno hababka daabacaadda, waxay isla markiiba noo horseedaan saddexda hab ee ugu muhiimsan ee jira oo ah saldhigga maalinteena. Nidaamyadan daabacaadda waxaa loo kala saaray sida: daabacaad offset ah, daabacaad dijital ah iyo sidoo kale loo yaqaan daabacaadda shaashadda.
Si aad u ogaato gacanta koowaad nidaamyada ugu habboon, waa in aan ogaano waxa uu yahay iyo waxa uu qabanayo nidaam kastaa. Taasi waa sababta aan u ururinay macluumaadka lagama maarmaanka ah si aan kuugu sharaxno.
Xigasho: Ventura Press
Habka wax-ka-qabashada waa habka ugu da'da weyn uguna isticmaalka badan ee daabacaadda warqadda. Waxa loo kala saaraa nooc ka mid ah habka daabacaadda dadban, taas oo macnaheedu yahay, in inta lagu jiro habka daabacaadda, sawirka ama elementka la daabacayaa uma baahna inuu si toos ah u tago saxanka, laakiin wuxuu u baahan yahay caag iyo taageero kama dambays ah.
Isticmaalka cinjirka ayaa ka dhigaya mid kasta oo ka mid ah khadadka midho dhal iyo Marka lagu dabaqayo alaabtan, ma abuuraan daxal ama ma dhaq-dhaqaaq mid kasta oo ka mid ah khadadka aad u badan.
Faa'iidooyinka isticmaalka nidaamkan:
Marka aan daabacno sawir ama dib u abuurno, sawir sax ah oo qumman ayaa la abuuray, kaas oo bixiya barta kalsoonida ee horumarinta aragtida.
Si ka duwan nidaamyada kale, nidaamka offset waxaa loogu talagalay inay ka kooban tahay tayo aad uga badan daabacaadeeda.
Faa'iidada kale ee nidaamkan in la tixgeliyo waa in aan isticmaali karno dhammaan noocyada waraaqaha iyo alaabta, kuwaas oo ayaa ka dhigaysa xitaa in la isticmaalo maadaama aan kala dooran karno kala doorashado kala duwan.
Sidoo kale waa mid ka mid ah nidaamyada ugu jaban, si ka duwan kuwa kale, qiimaha wax soo saarku aad ayuu u hooseeyaa.
Xagga arrimaha farsamada, daabacaadda offset-ka, waxay ilaalisaa xakamaynta astaanta midabka wanaagsan taas oo la isticmaalo mar kasta oo sidoo kale ku habboon maaha oo kaliya qalabka kale, laakiin leh khadadka kale.
Ma aha nidaam aad ku isticmaali karto kheyraadkaaga iyo shakhsi ahaan, maadaama habka daabacaadda uu ku salaysan yahay xaqiiqda ah in ay ka kooban tahay afar taariko oo gebi ahaanba ka duwan midba midka kale oo ilaaliya habka toosan.
Markii hore waxaan soo sheegnay in ay tahay mid ka mid ah hababka ugu dhaqaalaha badan, laakiin tan. wax soo saarka ballaaran waa lagama maarmaan. Taasi waa, haddii aan dooranno inaan dooranno nidaamkan, waa inaan maskaxda ku haynaa in si ay u noqoto mid dhaqaale, waa inaan daabacnaa wax badan.
daabacaad dijital ah, waa nooc daabacaad ah oo kuu ogolaanaya inaad si toos ah ugu daabacdo warqad. Inta lagu jiro habkan, ma jiraan arrimo dibadeed oo lug ku leh sida kiiska daabacaadda ka-dhaafka ah, laakiin habkani waa mid toos ah. Markaa si ka duwan nidaamyada kale, waxay ku siinaysaa hab daabacaad toos ah.
Waa mid ka mid ah nidaamyada daabacaadda, oo ay weheliso nidaamka offset-ka, oo hadda ah kuwa ugu isticmaalka badan. Nidaamkani wuxuu noqday mid aad muhiim u ah qaybta garaafyada maadaama daabacaaddu ay bixiso tayada iyo saxnaanta weyn.
Waa mid ka mid ah hababka daabacaadda ugu jaban uguna dhaqaalaha badan. Si ka duwan nidaamyada kale, waa in la isticmaalo haddii mugga daabacan uu aad u hooseeyo. Ka soo horjeeda waxay ku dhacdaa nidaamka ka-baxa, kaas oo u baahan mugga daabacaadda wanaagsan si qiimuhu u noqdo mid dhaqaale ahaan intii suurtagal ah.
si ka duwan inta kale, waa mid ka mid ah hababka ugu dhaqsaha badan ee loo isticmaalo, maadaama aysan u baahnayn taargooyin, sawirka si toos ah ayaa loogu daabacaa taageerada waxaana la daabacaa marka ikhtiyaarka la furo.
Adigoo aan isticmaalin birta, haa waxaan habayn karnaa habka daabacaadda. Waxa aan u habayn karno si aan rabno oo taxane ah oo kala duwan iyo xulashooyin.
Gaaban, Waa habka daabacaadda ee aan inta badan isticmaalno mar walba.
Nidaamkan ma aqbalo khad kasta, maadaama aan kaliya ku daabacan karno astaanta midabka CMYK. Muuqaalka midabka CMYK waa astaanta midabka daabacaadda, kaas oo, ka duwan astaanta kale, RGB, loo isticmaalo kaliya eegida hore ee shaashadda.
Tayadeedu way ka hoosaysaa tayada sawirka ee nidaamka dhimista
Waxaa laga yaabaa in inta lagu jiro daabacaadda, waxaa jira khalkhal ku yimaadda khadadka warqadda haddii aan si fiican loola dhaqmin oo aan la dooran doorashada saxda ah. Waa hab ku lug leh khibrad farsamo oo aad uga badan.
Xigasho: The Hal-abuurka cagaaran
Daabacaadda shaashadda waa hab kale oo daabacaadeed kaas oo ujeedadiisa ugu weyn, waa in nooc khad la dhex maro shabag kacsan. Waxa kale oo loo arkaa habka daabacaadda tooska ah, maadaama ay ka kooban tahay oo keliya hababka aan soo sheegnay.
Faa'iidooyinka habkan daabacaadda:
Waxay la shaqeysaa codad midab leh oo aad u wanaagsan oo soo jiidasho leh iyo muuqaallo. Taas oo dhalisa natiijooyin aad u wanaagsan.
Waa hab daabacan oo sahlan oo la sameeyo oo aad hal abuur leh. Intaa waxaa dheer, waxaad ku shaqeysaa midabada gacanta koowaad. Iyadoo aan la marin mashiinada si toos ah u soo saara.
Inaga oo ah hab shakhsiyeysan, waxaan isticmaali karnaa dhammaan noocyada taageerada, dunta, alwaax, warqad, kartoon, iwm.
Alaabta waa dib loo isticmaali karaa, tan iyo Waxaan dib u isticmaali karnaa mar kasta oo aan rabno.
Khasaaraha nidaamkan daabacaadda:
Sida caadiga ah ma laha wax soo saar badan maalmahan, in kasta oo ay tahay hab sahlan oo la sameeyo.
Sababtoo ah la'aanta qalabka fulinaya qiyamka chromatic ilaa millimitirka, waxaa jiri kara isbeddel midab leh natiijooyinka ugu dambeeya.
Si fudud uma engegin maadaama ay u baahan tahay saacado iyo waqti.
Noocyada noocaan ah waxaa lagu gartaa tayada sare ee ay ku ilaalinayaan natiijooyinkooda. Caadi ahaan waxaa lagu gartaa habka ay u shaqeeyaan, maadaama ay la mid tahay kan sawir-qaade. Iyada oo loo marayo nooc ka mid ah laysarka, sawirka ayaa la raray oo si toos ah loogu dul saadaaliyay warqad. Waa mid ka mid ah daabacayaasha aadka loo isticmaalo ilaa hadda.
Madbacadaha monochrome, sida magacaba ka muuqata, waxaa loogu talagalay oo kaliya inay daabacaan hal midab, kaas oo inta badan madow. Waa daabacayaal ku shaqeeya xawaare sare, taas oo macnaheedu yahay waqti lumis yar. Marka la daabaco hal midab, waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa mid ka mid ah daabacayaasha ugu jaban, maadaama qiimihiisu aanu aad u kordhin.
Marka la soo koobo, waa daabacaha ugu fiican si aad u fuliso mashaariicdaada monochrome oo aad naftaada u galiso aduunka khadadka gaarka ah. Intaa waxaa dheer, qiimaha jaban awgeed, kumanaan iyo kumanaan taran tiro badan ayaa la abuuri karaa.
Madbacadaha Inkjet-ka ayaa ah daabacadaha ay aad ugu badan tahay in lagu arko guryahayaga ama xafiis kasta oo aan tagno. Si aad si ka sii fiican u fahamto, waa daabacayaasha caadiga ah ee aan waligeen ku haysanay shelf ama miiska. Waxay la shaqeeyaan irbado taxane ah oo khad daadiya oo taas ka fulinaya sawirka ama qoraalka.
Waxa laga yaabaa in aan si buuxda loogu qancin madbacadahani waa in wakhti ka waqti, aad u baahan tahay inaad soo iibsato xirmo midabyo cusub ah si aad u daabacdo. Laakiin tayada waa mid la aqbali karo oo aad u wanaagsan.
Qaybta daabacaaddu aad bay u ballaadhan tahay oo waxay qaadanaysaa bilo iyo xitaa sannado tababar ah in si buuxda loo fahmo. Waxa jira habab badan oo ay ugu wacan tahay horumarka tignoolajiyada iyo koboceeda, habab cusub ayaa la sameeyay, kuwo cusubna la tijaabiyo maalin kasta.
Sida nidaamyada, wax la mid ah ayaa ku dhaca daabacayaasha, waxaa jira qaar badan oo jira oo aanaan ku darin liiska, maadaama mid kasta oo iyaga ka mid ah loogu talagalay in uu buuxiyo ujeeddooyin taxane ah oo ka dhigaya kuwo gaar ah oo shaqeynaya, waxayna daboolaan baahiyo kala duwan. .
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » nidaamyada daabacaadda
Waa maxay noocyada qaabka sawirka jira?